သင့်ပါတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ လူတွေကို ယုံကြည်ဖို့က သင့်အတွက် ခက်ခဲပါသလား?
ဘယ်အရာတွေက သင့်အတွက် လူတစ်ယောက်ကို ယုံကြည်ဖို့ ခက်ခဲစေတာလဲ?
လူတစ်ယောက် ကို ယုံကြည်ဖို့ အတွက် ဘာကအရေးအကြီးဆုံးလဲ? တစ်ခုရွေးပါ
ယုံကြည်မှုခက်ခဲခြင်း (trust issues) ရှိတာက ကိုယ့်ဘဝကို ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မယ်လို့ထင်လဲ? တစ်ခုရွေးပါ